Klopp: ” Waan Jeclaan Lahaa Inaan Jarmalka Leyliyo Balse…” – Garsoore Sports
Klopp: ” Waan…
Jurgen Klopp ayaa albaabka u furay inuu tababaro xulka qaranka Jarmalka mustaqbalka, laakiin wuxuu sheegay inuusan ka tagi karin waajibaadka haatan saaran ee leylinta Liverpool.
Tababaraha Reds ayaa si aad ah loola xiriiriyay doorkan kaddib markii tababare Joachim Low uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo shaqada tababaranimo ee Jarmalka dhammaadka Euro 2020, balse Klopp ayaa si dhaqso leh ugu dhaqaaqay inuu joojiyo wararkaas isla markaana uu xaqiijiyo rabitaankiisa ahaa joogitaanka Anfield.
Intii lagu jiray wareysiga uu siinayay Bild, Klopp wuxuu ku andacooday inuu go’aankiisa yahay inuu iska diiday inuu tartamo sababtoo ah kama tagi karo Liverpool, halkii si fudud loo oran lahaa ma rabin inuu qabto shaqada tababaraha xulka.
“Waan ka xumahay SportBild, inaanan sii wadi karin inaan sii qiiroodo,” ayuu yiri isagoo dhoola cadeynaya. “Laakiin waxa muhiimka ah waa: Ma’aanan dhihin ma aanan dooneyn inaan noqdo tababare qaran, laakiin taasi ma awoodo. Taasi waa farqi weyn.”
Tababaraha Liverpool ayaa qirtay in noqoshada tababaraha xulka qaranka Jarmalka “ay sharaf weyn u tahay su’aal la’aan”, laakiin wuxuu sii raaciyay in waqtiga uu noqon lahaa aan si sax ah loo gaarin.